OweChippa ubona besenethuba lokubalekela izembe - Impempe
OweChippa ubona besenethuba lokubalekela izembe
April 12, 2021 April 12, 2021 Impempe.com
USiyabulela Gwambi oqeqesha iChippa United
Unethemba elikhulu lokuthi indlela abadlale ngayo bebhekene neMamelodi Sundowns izobagqugquzela umqeqeshi obambili kwiChippa United, uSiyabulela Gwambi.
IChilli Boys ikhale ngaphansi ngo 2-1 emdlalweni weDStv Premiership eSisa Dukashe Stadium, ngoMsombuluko. Lona bekungumdlalo wokuqala uGwambi ephethe izintambo selokhu kuxoshwe uDan “Dance” Malesela kulandela ukubhaxabulwa yiMaritburg United ngo 5-1 eHarry Gwala Stadium, eMgungundlovu.
Isimo sibi kakhulu kwiChippa njengoba isendaweni yesibili ukusuka emsileni ngamaphuzu angu-17. Kubi kakhulu ngoba iqembu elingaphezulu kwayo, iTshakhuma, linamaphuzu angu-19 kanti lisalele emuva ngomdlalo owodwa.
“Siwuqale ngegiya eliphansi umdlalo. Ngicabanga ukuthi uhlelo lwethu bekuwukuthi sivimbe emuva ngoba siyazi ukuthi iSundowns iyakwazi ukugijima.
“Sithe asingayi kakhulu phambili silinde uma sithola ibhola sisebenzise izikhala ezingase zivuleke. Bayiqembu elihlale lisebenzisa abadlali balo basemuva ukuhlasela, futhi uma kwenzeka lokho kusala izikhala emuva.
“Iqhinga lethu bekuwukuthi sibahlasele ngokuzuma kodwa ngemuva kokuthi beshaye igoli bekumele sishintshe indlela ebesenza ngayo. Ngesikhathi sesidlala sakuhlasela sikwazile ukwakha amathuba ngesiwombe sokuqala. Ngesesibili siphinde sawakha amathuba saze sathola igoli,” kusho uGwambi.
IChilli Boys seyisalelwe imidlalo eyisishiyagalombili kuphela ngakho kuzomele iqale ukuqoqa amaphuzu.
“Ngicabanga ukuthi indlela esidlale ngayo singayisebenzisa ukuzigqugquzela ukuya phambili. Ngiyabona ukuthi abadlali baphoxekile kodwa asikho isidingo salokho ngoba luselude ukhalo,” kusho uGwambi.
“Ngesikhathi siya kulo mdlalo (weSundowns) umoya ubumuhle kakhulu ekhempini yethu. Angifuni ukuthi lo mdlalo ufike ngesikhathi esingesihle. Kodwa omunye angathi ukube sidlale nelinye iqembu kuqala bese sidlale neSundowns bekungaba isimo esihlukile.
“Sizozama ngakho konke okusemandleni ethu ukwenza kahle emdlalweni ozayo njengoba senzile namuhla. Sizobuyela emsebenzini, sinomdlalo owandulela owamanqamu weNedbank Cup ngempelasonto nePretoria Callies, okuyiqembu esingeke silithathe kancane. Sizozama ukuhlela ngendlela yethu. Nokho kumele siqonde ukuthi iligi nomdlalo womkhumulajezi kuhluke kakhulu,” kuphetha uGwambi.
Emdlalweni olandelayo weligi iChippa izobhekana neBaroka FC eNelson Mandela Bay Stadium ngo-Ephreli 20.
Previous Previous post: AmaProteas azibuyise zishisa kwiPakistan eWanderers
Next Next post: Sidinga yonke inhlanhla kulesi sikhathi sesizini – Mngqithi